အွန်လိုင်းပါတီမှာပျော်ပျော်ကြီးသောက်ကြစားကြမယ် !!!! - JAPO Japanese News
ဂါ 18 Aug 2020, 9:47 မနက်
ကိုရိုနာကြောင့် တော်တော်နဲ့လုပ်လို့မရတဲ့ထဲမှာ ဘော်ဒါတွေနဲ့ သောက်ကြစားကြတဲ့ အရာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အလုပ်ပြီးလို့ ပင်ပန်းသွားတဲ့အချိန် . . . တစ်ခါတစ်လေ လူအများကြီးနဲ့ ဆူဆူညံညံ သောက်စားပြီး နေချင်တဲ့အချိန်တွေရှိမှာပါ။
ဒီလိုမျိုးက တကယ်ပဲ . . . ပျော်ဖို့ကောင်းလို့လား !!!
သေချာတာကတော့ အပြင်မှာတွေ့တာလိုတော့ တစ်ထပ်တည်းဘယ်ကျမလဲ‌နော်။သို့ပေမယ့်လည်း . . . အချိန်ကာလအရ ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိသောကြောင့် အွန်လိုင်းပါတီကို ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်နည်းလေးရှာပြီး စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ?
ဒီလိုအွန်လိုင်းအရက်ပါတီအတွက်စားဖို့ Set လေးနဲ့ ဆိုရင်ကော?
ဧရိယာကန့်သတ်ထားပေမယ့် လူတိုင်းက တူညီတဲ့အစာကိုစားနိုင်အောင် လုပ်ပေးကာ တစ်ယောက် တစ်Set စီဆိုပြီး သတ်မှတ်လိုက်တယ်။
အွန်လိုင်းမှာ သောက်သုံးသူများအတွက် အစားအစာပြုလုပ်ကာရောင်းချပေးတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။
ဒီလို တစ်ခုချင်းဆီကို ပါဆယ်ဝယ်ပြီးဖြစ်ဖြစ် အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်မှုနဲ့ဖြစ်ဖြစ် မှာယူနိုင်ပါတယ်။
“ ဒီ . . .Rosted Beef လေးက ‌တော်တော်ကောင်းတဲ့ အရသာပါပဲ!” ထိုကဲ့သို့သောစကားဝိုင်းနဲ့လည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။အရသာရှိလွန်းလို့ မသောက်ခင်မှာ မစားမိစေဖို့ သတိပြုပါ။
Yakitori ကင်စက်လည်းရှိပါတယ်။လူတိုင်း မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဟင်းလျာများပြင်ဆင်သလိုပဲ
Zoom သည် virtual နောက်ခံတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီး
yakitori စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ ဆူညံတဲ့ဓာတ်ပုံနောက်ခံတစ်ခုကိုသတ်မှတ်ထားရင်၊
ဖန်သားပြင်ကိုကြည့်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ကင်ထားတဲ့ အသားကင်ရဲ့ လှပမှုကိုခံစားရမှာပါ။
ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာသင့်အိမ်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှပြန်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့။တစ်ချိန်တည်းတွင်ဂိမ်းကစားခြင်းကလည်း စိတ်၀င်စားစရာကောင်းနိုင်ပါတယ်။
Zoom ကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းသောက်သုံးသူများသည် PC သို့မဟုတ် iPad နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီး အသုံးပြုကြတဲ့အခါ အွန်လိုင်းဂိမ်းအတူတူဆော့ရင်းနဲ့ အပန်းဖြေလို့ရပါတယ်။ထို့အပြင်စမတ်ဖုန်းတွင် ဂိမ်းတွင်ပါ၀င်သူတိုင်းအတွက်လည်း အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ဂိမ်းအတူတူကစားကြမယ်ဆိုရင်လည်း ပျော်စရာကြီးပေါ့။
ဂိမ်းတစ်ခုတည်းတွင် မျက်နှာကိုမမြင်ရသောအသံကို ကြားရုံနဲ့ အားမရဘူး။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင် Zoom ဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါက ၎င်းသည်နောက်ထပ်ပျော်စရာအဆင့်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျယ်လောင်စွာရယ်မောရင်းနဲ့ ဂိမ်းမှာလည်း ပျော်မွေ့နေပါလိမ့်မယ်။အွန်လိုင်းသောက်စားခြင်းပါတီများအတွက် အခြားအကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါတယ်။အိမ်မှာရှိနေလို့ အိမ်ပြန်နောက်ကျဖို့ အကြောင်းပြချက်မရှိဘူး။
အကယ်၍ သင်သည် အပေါ်ပိုင်းကိုသာမြင်နိုင်သည်ဆိုပါက သင့်ရဲ့ အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ရှိဘောင်းဘီကို ကြိုက်သလိုဝတ်ဆင်နိုင်တယ်။
အရမ်းမူးနေရင်တောင် သင့်အိမ်မှာပဲဖြစ်လို့ ပြန်ဖို့အတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ပျော်စရာကြီးပါနော် . . .ကြိုက်သလောက်သောက်လို့ရတယ်။
အွန်လိုင်းအရက်သောက်ခြင်းပါတီအကြောင်းကို မကြားဖူးဘူး၊ မလုပ်ဖူးဘူးဆိုရင်လည်း
ကျေးဇူးပြုပြီးစိတ်မပူပါနဲ့. . .‌
သောက်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ အပြင်မှာမသောက်ပဲ ကိုရိုနာလည်း ကာကွယ်ရာရောက်ပြီး စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင် မျှော်လင့်ထားတာထက်ပိုပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့အွန်လိုင်းသောက်စရာပါတီကို ခံစားကြည့်နိုင်မှာပါနော်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်ဟာ သောက်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် အွန်လိုင်းပါတီကို စမ်းကြည့်ကြည့်ပါ။
Stay Home မှာ ဘာတွေလုပ်နေကြသလဲ?
ကားထဲမှာပဲ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ရုံးဖြစ်လာစေမယ့် လမ်းညွှန် !!!!!